ပို့ကုန်/ သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း။
1. နိုင်ငံခြားဈေးကွက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းများနှင့် ပတ်သက်သည့်အချက်များကို သိချင်ပါသည်။
ITC ၏ Market Access Map တွင် တိကျသောထုတ်ကုန်တစ်ခုအတွက် ဈေးကွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ သင်သည် တင်ပို့သည့်နိုင်ငံ၊ တင်သွင်းသည့်နိုင်ငံ နှင့် စိတ်ဝင်စားသည့် ကုန်ပစ္စည်း၏ HS-6 ကုဒ် ကို ဖြည့်သွင်းရပါမည်။ သင်သည် ကုန်ပစ္စည်း၏ HS-6 ကုဒ် အတိအကျကိုရိုက်ပြီးလည်း ရှာနိုင်ပါသည်။ https://www.macmap.org
2. မြန်မာ့ပို့ကုန်ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို သိချင်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ ကုန်စည်တင်ပို့ခြင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန်သည် မြန်မာနိုင်ငံမှ ပို့ကုန်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြည့်စုံသောလမ်းညွှန်မှုများပေးပါသည်။ (https://www.myanmartradeportal.gov.mm/en/guide-to-export)
3. ပို့ကုန်/ သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို မည်သို့လေ့လာနိုင်သနည်း။
မြန်မာနိုင်ငံမှ ကုန်စည်တင်ပို့ခြင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန်သည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ တင်သွင်းကုန်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြည့်စုံသောလမ်းညွှန်မှုများပေးပါသည်။ (https://www.myanmartradeportal.gov.mm/en/guide-to-import)
4. မြန်မာနိုင်ငံမှတင်ပို့ရန်အတွက် ခွင့်ပြုချက်လိုပါသလား။
ယေဘုယျအားဖြင့် လိုအပ်ပါသည်။ ကုန်ပစ္စည်းအများစုသည် ပို့ကုန်မှတ်ပုံတင် (Export License) ရှိရပါမည်။ သို့ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရသည် ဤသို့မှတ်ပုံတင်ရယူရသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လျှော့ချရန်အတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် အချို့သော သတ်မှတ်ကုန်ပစ္စည်းများ တင်ပို့မှုကို တားဆီးထားပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ ကုန်စည်တင်ပို့ခြင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန်၏ ဤစာမျက်နှာတွင် ပိုမိုလေ့လာနိုင်ပါသည်။ (https://www.myanmartradeportal.gov.mm/en/guide-to-export#Export%20Licenses)
5. အရေးယူမှု (Sanctions) ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။ ကျွန်ုပ်နှင့်သက်ဆိုင်မှု ရှိပါသလား။
အရေးယူမှုများဆိုသည်မှာ လူမှုရေးဆိုင်ရာစံချိန်စံနှုန်းနှင့် ကိုက်ညီသော၊ အဓိကအားဖြင့် စီးပွားရေးဖိအားပေးခြင်း သို့မဟုတ် ပိတ်ဆို့ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းကို ခေါ်ဆိုပါသည်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှ နိုင်ငံတကာဥပဒေများကို ချိုးဖောက်လျှင် အခြားနိုင်ငံများမှဝိုင်းဝန်း၍ ဤပြစ်ဒဏ်များအား သတ်မှတ်ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် တင်ပို့သည့်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် တင်ပို့ချင်သော နိုင်ငံအပေါ်မူတည်၍ တင်ပို့သူအပေါ်သို့ အကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိပါသည်။ UN၊ EU ၊ OFAC ၊ HM ၊ နှင့် DFAT တို့မှ ချမှတ်ထားသော ပြစ်ဒဏ်များအား Comply Advantage website တွင်ဝင်ကြည့်ပြီးသိနိုင်ပါသည်။ (https://complyadvantage.com/knowledgebase/what-are-sanctions/)
6. အိန္ဒိယသို့ ကုန်ပစ္စည်းများတင်ပို့သောအခါ အခွန်ပေးရမည်လား။
ကုန်ပစ္စည်းအပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ အကောက်ခွန်ကြေညာခြင်းကို အကောက်ခွန်ဌာနသို့တင်ပြပြီး အကောက်ခွန်ဌာနမှ လက်ခံလိုက်သည်နှင့် တပြိုင်နက် အကောက်ခွန်ဌာနသို့ တိကျသောတင်ပို့ကုန်များအတွက် အခွန်များ ပေးချေရပါမည်။ တင်ပို့ကုန်များကို အခွန်ဆောင်ရခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှ ကုန်စည်တင်ပို့ခြင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန် ၏ Website စာမျက်နှာတွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။ (https://www.myanmartradeportal.gov.mm/en/guide-to-export#Classification%20and%20Value%20Imports)
7. မြန်မာနိုင်ငံမှ ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ပို့ကုန်ဝန်ဆောင်မှုများကို တင်ပို့လိုပါက အခွန်ပေးဆောင်ရမည်လား။
ကုန်ပစ္စည်းအပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ အကောက်ခွန်ကြေငြာခြင်းကို အကောက်ခွန်ဌာနသို့တင်ပြပြီး အကောက်ခွန်ဌာနမှ လက်ခံလိုက်သည်နှင့် တပြိုင်နက် အကောက်ခွန်ဌာနသည် တိကျသောတင်ပို့ကုန်များအတွက် အခွန်များ ပေးချေရပါမည်။ တင်ပို့ကုန်များကို အခွန်ဆောင်ရခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှ ကုန်စည်တင်ပို့ခြင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန်၏ Website စာမျက်နှာတွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။ (https://www.myanmartradeportal.gov.mm/en/guide-to-export#Classification%20and%20Value%20Imports)
8. ကျွန်ုပ်သည် စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ ကုန်ပစ္စည်းများကို တင်ပို့ချင်ပါက ခွင့်ပြုချက် လိုပါမည်လား။
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနသည် အချို့ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ ကုန်ပစ္စည်းများကို တင်ပို့/ တင်သွင်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် ကြေငြာချက်တစ်ခုကို ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ (https://www.moali.gov.mm/sites/default/files/attached-files/2016/11/Procedure%20for%20import_export_english.pdf)
9. ကျွန်ုပ်သည် နိုင်ငံခြားဈေးကွက်များ၏ မဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ရသော ကုန်ပစ္စည်း အမှတ်တံဆိပ်တပ်ခြင်း၊ မှန်ကန်ကြောင်းတရားဝင်ထောက်ခံခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်း၏ စံချိန်စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များ စသည်တို့ကို ပြည့်မီစေရန်အတွက် နည်းလမ်းတကျ အကဲဖြတ်ခြင်းများနှင့် ပတ်သက်ပြီး အကူအညီလိုအပ်ပါသည်။
ITC ၏ Market Access Map သည် အသုံးပြုသူများအား တင်ပို့သူ၊ တင်သွင်းသူနှင့် ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သည့် နှစ်ကာလအတိအကျစသည်တို့နှင့် ကိုက်ညီသော တင်သွင်း တင်ပို့ခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းလိုအပ်ချက်များကို နားလည်သိရှိစေရန် အကူအညီပေးပါသည်။ (https://www.macmap.org/en/query/regulatory-requirement?reporter=276&partner=104&product=040900&level=6&rtype=I)
ပို့ကုန်ဆိုင်ရာ ယေဘုယျ အကူအညီများ
1. ကျွန်ုပ်သည် မြန်မာနိုင်ငံမှ တင်ပို့ချင်ပါသည်။ မည်သို့စတင်ဆောင်ရွက်ရမည်နည်း။
မြန်မာနိုင်ငံမှ ကုန်စည်တင်ပို့ခြင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ကုန်ပစ္စည်းများကို တင်ပို့ရန်အတွက် လမ်းညွှန်မှုအပြည့်အစုံကို ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ (https://www.myanmartradeportal.gov.mm/en/guide-to-export)
2. ကျွန်န်ုပ်၏ ကုန်ပစ္စည်းကို မြန်မာနိုင်ငံသို့ တင်သွင်းချင်ပါသည်။ မည်သို့ စတင်ဆောင်ရွက်ရမည်နည်း။
မြန်မာနိုင်ငံမှ ကုန်စည်တင်ပို့ခြင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ကုန်ပစ္စည်းများကို တင်သွင်းရန်အတွက် လမ်းညွှန်မှုအပြည့်အစုံကို ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ (https://www.myanmartradeportal.gov.mm/en/guide-to-import)
3. Myantrade သည် တင်ပို့သူများအတွက် ငွေကြေးဆိုင်ရာအကူအညီ ပေးပါသလား။
လတ်တလောတွင် Myantrade သည် တင်ပို့သူများအတွက် ငွေကြေးဆိုင်ရာအကူအညီမပေးပါ။
4. တင်ပို့သူများအတွက် သတင်းအချက်အလက်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများပေးသော အခြား Website များရှိပါသလား။
မြန်မာနိုင်ငံမှ ကုန်စည်တင်ပို့ခြင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန်တွင် နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော သတင်းအချက်အလက်များစွာကို ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ (https://www.myanmartradeportal.gov.mm/en/guide-to-import)
ITC ၏ Market Analysis Tools လမ်းညွှန်တွင် မြန်ဆန်သော Website ကို အခြေခံသည့်အချက်အလက်များပါဝင်သည့် Website ၄ ခု ရှိပါသည်။ Trade Map တွင် နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးစီးဆင်းမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ စာရင်းအင်းများနှင့် ကိန်းညွှန်းများရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ Market Access Map တွင် ကုန်စည်စည်းကြပ်အခွန်များ၊ ကုန်ပစ္စည်းများကို အကာအကွယ်ပေးနိုင်သည့် ကိန်းညွှန်းများနှင့် ကုန်ပစ္စည်းအခွန်စည်းကြပ်ခြင်းဆိုင်ရာ သဏ္ဍာန်တူအထောက်အပံ့ကို ရှာဖွေနိင်ပါသည်။ Standards Map တွင် သီးသန့်ဖြစ်သော ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ စံချိန်စံနှုန်းများနှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ Investment Map တွင် နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှပ်နှံခြင်း (FDI)၊ ကုန်သွယ်ရေး၊ ဈေးကွက်များသို့ ဝင်ရောက်နိုင်ခြင်းအပြင် နိုင်ငံခြားနှင့် ပူးတွဲဆောင်ရွက်နေသော ကုမ္ပဏီများနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ (https://marketanalysis.intracen.org/)
5. Myantrade သည် နိုင်ငံခြားမှ ကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်သည့် မူလဒေသအား သိရစေရန် ကူညီပါသလား။
Myantrade သည် ကုန်ပစ္စည်းများအားထုတ်လုပ်သည့် မူလဒေသနှင့် ပတ်သက်ပြီး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် ဈေးကွက်အချက်အလက်များကို တိတိကျကျသိရစေရန် ထောက်ပံ့အကူအညီပေးပါသည်။ သင်သည် မေးမြန်းစုံစမ်းခြင်းပုံစံကို အသုံးပြုပြီး သိလိုသည့် ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို ဖြည့်သွင်းမေးမြန်း နိုင်ပါသည်။ သို့မဟုတ် သင့်လျော်သောအကူအညီများရယူရန် ကျွန်ုပ်တို့ထံ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
6. Myantrade သည် မြန်မာနိုင်ငံမှ ကုန်ပစ္စည်းများကို တင်ပို့ရောင်းချရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသလား။
Myantrade သည် ကုန်ပစ္စည်းများကို တင်ပို့ရောင်းချခြင်းရန်အတွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် ဈေးကွက်အချက်အလက်များကို ဆုံးဖြတ်ချက်များချနိုင်ရန် ထောက်ပံ့အကူအညီပေးပါသည်။ သင်သည် မေးမြန်းစုံစမ်းခြင်းပုံစံကို အသုံးပြုပြီး သိလိုသည့် ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို ဖြည့်သွင်းမေးမြန်း နိုင်ပါသည်။ သို့မဟုတ် သင့်လျော်သောအကူအညီများရယူရန် ကျွန်ုပ်တို့ထံ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
7. ပင်ရင်းနိုင်ငံသက်သေခံလက်မှတ် (Certificate of Origin) ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခု သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခု၏ မူရင်းဒေသကို အတည်ပြုပေးသော တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ ကုန်စည်တင်ပို့ခြင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန်တွင် ASEAN အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအတွက် အခွင့်အရေးပေးသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် မူရင်းဒေသနှင့် သက်ဆိုင်သည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအကြောင်းကို အသေးစိတ်လေ့လာနိုင်ပါသည်။ (https://www.myanmartradeportal.gov.mm/en/rules-of-origin)
8. နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ဝေါဟာရများဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ဝေါဟာရများသည် နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးတွင် အသုံးများသော ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ဝေါဟာရများကို ဘာသာပြန်ရာ၌ အသုံးပြုသော နိုင်ငံတကာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ အသုံးအနှုန်းများကို နိုင်ငံတကာတွင် ကွဲပြားစွာ ဘာသာပြန်မှုများနှင့် မသေချာမှုများကိုများစွာ လျှော့ချပေးနိုင်ပါသည်။ နိုင်ငံတကာကုန်သည်ကြီးများအသင်းသည် နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ဝေါဟာရများအား အသုံးပြုပုံများကို ထုတ်ဝေထားပါသည်။ ပိုပြီးသိရစေရန် ၎င်းတို့၏ Website သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ (https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-2020/)
9. Myantrade သည် တင်ပို့ရာတွင် အမျိုးသမီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအား မည်သို့ ကူညီနိုင်သနည်း။
Myantrade သည် မြန်မာနိုင်ငံမှ အမျိုးသမီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအား အကူအညီများ ပေးအပ်နေပါသည်။ သင်သည် မေးမြန်းစုံစမ်းခြင်းပုံစံကို အသုံးပြုပြီး ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ သိလိုသည့်အချက်အလက်များကို ဖြည့်သွင်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ သို့မဟုတ် သင့်လျော်သော အကူအညီများရယူရန် ကျွန်ုပ်တို့ထံတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါ။
10. Myantrade သည် နိုင်ငံခြားသို့ ခရီးထွက်ရန်အတွက် ဗီဇာကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး အကူအညီများပေးအပ်ပါသလား။
Myantrade သည် နိုင်ငံခြားသို့ ခရီးထွက်ရန်အတွက် ဗီဇာကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး အကူအညီများ မပေးအပ်ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ သင်သွားလိုသည့်နိုင်ငံ၏ သံရုံးတွင်ရှိသော ကောင်စစ်ဝန်ဆိုင်ရာ အကူအညီများကို ရယူပါ။
1. Myantrade သည် တင်ပို့ခြင်းဆိုင်ရာ အမှာစာကို ဖြည့်ရာတွင် ရောင်းချသူများအား ကူညီပါသလား။
Myantrade ၏ Website တွင်ရှိသော စီးပွားရေးဝန်ဆောင်မှုများလမ်းညွှန်တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ (INSERT NEW HYPERLINK HERE)
2. အကောက်ခွန်ပေးဆောင်ရခြင်းနှင့်ပတ်သက်သာ အကျိုးဆောင် သို့မဟုတ် ကုန်စည်ပေးပို့ပေးသူ ကို မည်သို့ရှာရမည်နည်းး။
3. မြန်မာနိုင်ငံတွင် စာရွက်စာတမ်းဘာသာပြန်သူ သို့မဟုတ် စကားပြောဘာသာပြန်သူကို မည်သို့ ရှာရမည်နည်း။
1. ငွေပေးချေမှုများကို လက်ခံခြင်းနှင့် ပေးပို့ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အလုံခြုံဆုံးသော နည်းလမ်းမှာ အဘယ်နည်း။
ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများကို စာချုပ်မချုပ်ဆိုမီ သို့မဟုတ် စာချုပ်ချုပ်ဆိုနေဆဲအချိန်တွင် သင်နှင့် ဝယ်ယူသူအကြားတွင် နှစ်ဦးလုံး အဆင်ပြေပြီး သဘောတူလက်ခံသော ငွေပေးချေသည့်နည်းလမ်းများကို စဉ်းစားရပါမည်။ တင်ပို့ရောင်းချသူ တစ်ဦးအနေနှင့် ငွေပေးချေမှုကို လက်ခံရရှိရန် အလုံခြုံဆုံးနည်းလမ်းမှာ ကြိုတင်ငွေသားလက်ခံခြင်းနည်းလမ်း ဖြစ်ပါသည်။ သင်သည် တင်ပို့သူဖြစ်ပါက ဘဏ်မှ ချေးငွေလက်မှတ် (Letters of Credit-LCs) တောင်းခံခြင်းသည် ငွေကြေးလွှဲပြောင်းလက်ခံခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အလုံခြုံဆုံး ဖြစ်ပါသည်။
2. နိုင်ငံခြားဈေးကွက်များတွင် ဝယ်သူ သို့မဟုတ် ဖြန့်ဖြူးသူနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှု ဖြစ်ပေါ်ပါက မည်သို့ဆောင်ရွက်သင့်သနည်း။
Myantrade သည် သင့်အား ဒေသတွင်းရှိ ဥပဒေဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးပြီး အကူအညီများပေးနိုင်ပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေး သဘောတူညီချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ အခြေခံအချက်အလက်များကို မျှဝေပေးခြင်းနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာကျင့်ထုံးများအတွက် အကြံဉာဏ်ပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် Myantrade သည် ဥပဒေဆိုင်ရာ အကြံဉာဏ်များ ပေးမည်မဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်၏ကုန်ပစ္စည်းများကို တင်ပို့ရန် ပြင်ဆင်ခြင်း။
1. ပင်လယ်စာ၊ သဘာဝထွက်ကုန်များ၊ အစေ့အဆန်များ၊ အပင်မှရရှိသော ထွက်ကုန်များ၊ သစ်သီးဝလံနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ အစရှိသည့် စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ ကုန်ပစ္စည်းများကို မည်သို့တင်ပို့ရမည်နည်း။
စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန် အချို့သည် လူ၊ တိရိစ္ဆန်၊ အပင်နှင့် အစားအစာပိုးမွှားရောဂါ ကင်းစင်ကြောင်းလိုအပ်ချက် SPS နှင့် ကိုက်ညီရပါမည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ တင်ပို့သူများသည် မိမိတင်ပို့လိုသောနိုင်ငံများရှိ သတ်မှတ်ထားသော SPS လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ ကိုက်ညီရန်အတွက် ကြိုးပမ်းရပါမည်။ SPS နှင့် သက်ဆိုင်သော မေးခွန်းများကို သိရှိနိုင်ရန်အတွက် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန မှ ရေးဆွဲထားသော Website ဖြစ်သည့် အမျိုးသားစုံစမ်းရေးဌာန (Myanmar National Enquiry Point) တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။။ (https://ppdmyanmar.org/sps-ep/)
2. ပျားရည်ကို တင်ပို့ချင်ပါသည်။ SPS နှင့် ပတ်သက်၍ မည်သို့ ဆောင်ရွက်ရမည်နည်း။
စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန် အချို့သည် လူ၊ တိရိစ္ဆန်၊ အပင်နှင့် အစားအစာပိုးမွှားရောဂါ ကင်းစင်ကြောင်းလိုအပ်ချက် SPS နှင့် ကိုက်ညီရပါမည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ တင်ပို့သူများသည် မိမိတင်ပို့လိုသောနိုင်ငံများရှိ သတ်မှတ်ထားသော SPS လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ ကိုက်ညီရန်အတွက် ကြိုးပမ်းရပါမည်။ ပျားရည်တင်ပို့ရန် တင်ပို့ရောင်းချလိုသည့်နိုင်ငံမှ သတ်မှတ်ထားသော စာရွက်စာတမ်းများ အပြည့်အစုံတင်ပြရပါမည်။ လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများကို သိရှိစေရန် ITC ၏ Market Access Map ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ (https://www.macmap.org/)
မြန်မာနိုင်ငံတွင် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနနှင့် အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန တို့သည် SPS နှင့် ပတ်သက်၍ တာဝန်ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှကျင့်သုံးသော SPS စံချိန်စံနှုန်းများသည် CODEX, ASEAN, နှင့် OIE တို့မှ ကျင့်သုံးသော SPS စံချိန်စံနှုန်းများနှင့် တူညီပါသည်။ ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများသည် တင်ပို့လိုသော နိုင်ငံများမှ သတ်မှတ်ထားသော SPS လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီစေရန် မြန်မာနိုင်ငံမှ တင်ပို့သူများအား လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများကို ထုတ်ပေးပါသည်။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများနှင့် ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှ ကုန်စည်တင်ပို့ခြင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန် Website တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ (https://www.myanmartradeportal.gov.mm/en/measures)
ဈေးသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကာလပေါက်ဈေးနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ။
1. နိုင်ငံတကာဈေးကွက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုန်ပစ္စည်းများကို ဈေးသတ်မှတ်ရန် အကူအညီများ ရယူနိုင်ပါသလား။
ရောင်းချလိုသည့်ဈေးကွက်အတွင်း ယှဉ်ပြိုင်သူများ၏ ဈေးသတ်မှတ်ချက်များကို လေ့လာခြင်းသည် သင်၏ကုန်ပစ္စည်းကို ဈေးသတ်မှတ်ခြင်းမဟာဗျူဟာ၏ ပထမဆုံးအဆင့်ဖြစ်ပါသည်။ Myantrade သည် Kompass ရှိ အချက်အလက်များကို အသုံးပြု၍ ဈေးကွက်များတွင် ကုန်ပစ္စည်းများကို ဈေးသတ်မှတ်ရာ၌ အကူအညီများပေးပါသည်။ (INSERT NEW HYPERLINK HERE)
လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီမှုများမှရရှိသော အကျိုးကျေးဇူးများကို ခံစားရန် စံချိန်စံနှုန်းပြည့်မီမှု။
2. မြန်မာနိုင်ငံသည် လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီမှုများမှ အကျိုးအမြတ်များကို မည်သို့ရယူရမည်နည်း။
ASEAN လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီမှုများနှင့် ၎င်းတို့ပြဌာန်းထားသော သက်ဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးများကို ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီမှုများစာရင်းကို ဤ Website တွင် ရှာဖွေလေ့လာနိုင်ပါသည်။ (https://asean.org/links-3-2/asean-related-sites/)
မြန်မာနိုင်ငံမှ ကုန်စည်တင်ပို့ခြင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန်စာမျက်နှာတွင် လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီမှုများစာရင်းကို ကြည့်နိုင်ပါသည်။ (https://myanmartradeportal.gov.mm/en/mfn-tariffs-and-preferential-tariff-schedule-of-fta)
3. ပင်ရင်းဒေသစည်းမျဉ်း (Rules-of-Origin) ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။ ၎င်းတို့သည် လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ သဘောတူညီမှုများနှင့် ကုန်စည်စည်းကြပ် အခွန်များအပေါ် မည်သည့် သက်ရောက်မှုရှိသနည်း။
ပင်ရင်းဒေသစည်းမျဉ်း (Rules of Origin) သည် ပင်ရင်းနိုင်ငံသက်သေခံ လက်မှတ် (Certificate of Origin) တွင် ပါဝင်ပါသည်။ ထိုစာရွက်စာတမ်းသည် ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခု သို့မဟုတ် ကုန်စည်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခု၏ မူရင်းဒေသကို အတည်ပြုပေးသော တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ ကုန်စည်တင်ပို့ခြင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန် သည် ASEAN အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအတွက် ဦးစားပေးချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ပင်ရင်းဒေသစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအကြောင်း အသေးစိတ်အချက်အလက်များ ရှိပါသည်။ ထိုအချက်အလက်များမှတစ်ဆင့် သင်သည် ASEAN အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ဦးစားပေးသည့် အကျိုးကျေးဇူးများကို ခံစားရမည် ဖြစ်ပါသည်။ (https://www.myanmartradeportal.gov.mm/en/rules-of-origin)
နိုင်ငံခြားဈေးကွက်များနှင့် ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာစာရင်းအင်းများကို နားလည်နိုင်ရန်လေ့လာခြင်း။
1. နိုင်ငံတကာဈေးကွက်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဈေးကွက်သုတေသနဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို မည်သို့ရှာဖွေနိုင်သနည်း။
ITC ၏ Market Analysis Tools လမ်းညွှန်တွင် မြန်ဆန်သော Website ကို အခြေခံသည့်အချက်အလက်များပါဝင်သည့် Website ၄ ခု ရှိပါသည်။ Trade Map တွင် နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးစီးဆင်းမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ စာရင်းအင်းများနှင့် ကိန်းညွှန်းများရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ Market Access Map တွင် ကုန်စည်စည်းကြပ်အခွန်များ၊ ကုန်ပစ္စည်းများကို အကာအကွယ်ပေးနိုင်သည့် ကိန်းညွှန်းများနှင့် ကုန်ပစ္စည်းအခွန်စည်းကြပ်ခြင်းဆိုင်ရာ သဏ္ဍာန်တူအထောက်အပံ့ကို ရှာဖွေနိင်ပါသည်။ Standards Map တွင် သီးသန့်ဖြစ်သော ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ စံချိန်စံနှုန်းများနှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ Investment Map တွင် နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှပ်နှံခြင်း (FDI)၊ ကုန်သွယ်ရေး၊ ဈေးကွက်များသို့ ဝင်ရောက်နိုင်ခြင်းအပြင် နိုင်ငံခြားနှင့် ပူးတွဲဆောင်ရွက်နေသော ကုမ္ပဏီများနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ (https://marketanalysis.intracen.org/ )
2. ကျွန်ုပ်သည် နိုင်ငံခြားဈေးကွက်ရှိ အကောက်အခွန်များ ကို မည်သို့ရှာဖွေနိုင်မည်နည်း။
ITC ၏ Market Access Map တွင် တိကျသောထုတ်ကုန်တစ်ခုအတွက် ဈေးကွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကို ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ သင်သည် တင်ပို့သည့်နိုင်ငံ၊ တင်သွင်းသည့်နိုင်ငံနှင့် စိတ်ဝင်စားသည့် ကုန်ပစ္စည်း၏ HS-6 ကုဒ် ကို ဖြည့်သွင်းရပါမည်။ သင်သည် ကုန်ပစ္စည်း၏ HS-6 ကုဒ် အတိအကျကိုရိုက်ပြီးလည်း ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ (https://www.macmap.org/)
3. ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းများကို မည်သို့ရှာဖွေနိုင်သနည်း။
ITC ၏ Market Analysis Tools လမ်းညွှန်တွင် မြန်ဆန်သော Website ကို အခြေခံသည့် အချက်အလက်များပါဝင်သည့် Website ၄ ခု ရှိပါသည်။ Trade Map တွင် နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးစီးဆင်းမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ စာရင်းအင်းများနှင့် ကိန်းညွှန်းများကို ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ (https://trademap.org/)
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ (CSO) ၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် စစ်မှန်သော အရည်အသွေးနှင့် မှန်ကန်သောစာရင်းအင်းများကို စုဆောင်းခြင်း၊ ပေါင်းစည်းခြင်းနှင့် ဖြန့်ဝေခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ CSO ၏ အကူအညီဖြင့် အသုံးပြုသူများသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို စီစဉ်ရန်အတွက် ပိုပြီးအချိန်ကုန်သက်သာပြီး လုပ်ငန်းတွင်သော စနစ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ပြီး စာရင်းအင်းများကို ပေါင်းစည်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ CSO တွင် မူဝါဒရေးဆွဲသူများ၊ အစီအစဉ်ရေးဆွဲသူများ၊ သုတေသနပညာရှင်များနှင့် အခြားစိတ်ဝင်စားသော အသုံးပြုသူများအတွက် ဖြန့်ဝေထားသော သုတေသနစာတမ်းများ၊ အချက်အလက်စာရွက်စာတမ်းများအား လေ့လာနိုင်ပါသည်။ (https://www.csostat.gov.mm/)
4. ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရှိ လက်ရှိ စီးပွားရေးဝန်းကျင်မှာ အဘယ်နည်း။
ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ ၂၀၂၀ Doing Business အစီရင်ခံစာသည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရှိ လက်ရှိ စီးပွားရေးအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်သော အဖိုးတန်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ဖတ်ရှုနှိုင်ပါသည်။ (https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/b/bangladesh/BGD.pdf)
5. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအား ပထမဆုံးအကြိမ် အဝတ်အထည်များတင်ပို့ချင်ပါသည်။ မည်သို့စတင်ရမည်နည်း။
မြန်မာနိုင်ငံမှ ကုန်စည်တင်ပို့ခြင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ကုန်ပစ္စည်းများကို တင်ပို့ရန်အတွက် လမ်းညွှန်ချက် အပြည့်အစုံကို ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ (https://www.myanmartradeportal.gov.mm/en/guide-to-export)
ITC ၏ Market Access Map တွင် တိကျသော ထုတ်ကုန်တစ်ခုအတွက် ဈေးကွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကို ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ သင်သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ တင်ပို့ရန်အတွက် အဝတ်အထည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကုန်ပစ္စည်းများကိုလည်း ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ (https://www.macmap.org/)
6. ကျွန်ုပ်သည် တရုတ်နိုင်ငံသို့ အချိုနှင့်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကို တင်ပို့ချင်ပါသည်။ ဈေးကွက်အချက်အလက်ကို မည်သို့ရှာဖွေရမည်နည်း။
ITC ၏ Market Analysis Tools portal သည် လျှင်မြန်သော Website ကို အခြေခံသည့် အချက်အလက်များပါဝင်သည့် Website ၄ ခု ရှိပါသည်။ ထို Website တစ်ခုချင်းစီတွင် “တရုတ်နိုင်ငံ” သို့မဟုတ် “အချိုနှင့်ဆိုင်သော ကုန်ပစ္စည်းများ” စသည်ဖြင့် ကုန်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် နိုင်ငံအား တိတိကျကျရေးပြီး ရှာနိုင်ပါသည်။ Trade Map တွင် နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးစီးဆင်းမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ စာရင်းအင်းများနှင့် ကိန်းညွှန်းများရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ Market Access Map တွင် ကုန်စည်စည်းကြပ်အခွန်များ၊ ကုန်ပစ္စည်းများကို အကာအကွယ်ပေးနိုင်သည့် ကိန်းညွှန်းများနှင့် ကုန်ပစ္စည်းအခွန်စည်းကြပ်ခြင်းဆိုင်ရာ သဏ္ဍာန်တူအထောက်အပံ့ကို ရှာဖွေနိင်ပါသည်။ Standards Map တွင် သီးသန့်ဖြစ်သော ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ စံချိန်စံနှုန်းများနှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ Investment Map တွင် နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှပ်နှံခြင်း (FDI)၊ ကုန်သွယ်ရေး၊ ဈေးကွက်များသို့ ဝင်ရောက်နိုင်ခြင်းအပြင် နိုင်ငံခြားနှင့် ပူးတွဲဆောင်ရွက်နေသော ကုမ္ပဏီများနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ (https://marketanalysis.intracen.org/ )
1. ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာပြပွဲ၊ ပြခန်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီး သတင်းအချက်အလက်များအား မည်သို့ရယူရမည်နည်း။
Myantrade တွင် ကျင်းပလာမည့် သက်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေးပြပွဲများနှင့် ပတ်သက်၍ အချက်အလက်များကိုရယူနိုင်ပါသည်။ (INSERT NEW HYPERLINK HERE)
ကုန်သွယ်ရေးမိတ်ဖက်များကို ရှာဖွေခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်း။
1. မြန်မာနိုင်ငံမှ မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီများအား မည်သို့ရှာဖွေရမည်နည်း။
Kompass သည် စီးပွားရေးနှင့်ဆိုင်သောကဏ္ဍအားလုံးရှိ ထုတ်လုပ်သူများ၊ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ လက်ကားရောင်းချသူများ၊ တင်သွင်းသူများ၊ တင်ပို့သူများနှင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ အခြားစွန့်ဦးတီထွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ ပါဝင်သော အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလမ်းညွှန်ဖြစ်ပါသည်။ စီးပွားရေးဆောင်ရွက်ချက် အမျိုးအစား၊ ကုန်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ကုန်စည်ဝန်ဆောင်မှုများ၊ ကုန်စည်အရွယ်အစားဖော်ပြခြင်းများနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့မှ နာမည်များစသည်ဖြင့် ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ အသေးစိတ်ကိုရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ အာရှနိုင်ငံများဖြစ်သော ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ တရုတ်၊ ဟောင်ကောင်၊ အိန္ဒိယ၊ ဂျပန်၊ စင်ကာပူ၊ တောင်ကိုရီးယား၊ သီရိလင်္ကာ၊ ထိုင်ဝမ်၊ ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ်တို့မှ ကုမ္ပဏီများလည်းပါဝင်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ သင်သည် မေးမြန်းစုံစမ်းခြင်းပုံစံကို အသုံးပြုပြီး သိလိုသည့်အချက်အလက်ကို ဖြည့်သွင်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ သို့မဟုတ် သင့်လျော်သောအကူအညီများရယူရန် ကျွန်ုပ်တို့ထံ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
2. ပြင်သစ်နိုင်ငံမှ တင်ပို့သူများအား မည်သို့ရှာဖွေရမည်နည်း။
Lompass သည် စီးပွားရေးနှင့်ဆိုင်သောကဏ္ဍအားလုံးရှိ ထုတ်လုပ်သူများ၊ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ လက်ကားရောင်းချသူများ၊ တင်သွင်းသူများ၊ တင်ပို့သူများနှင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ အခြားစွန့်ဦးတီထွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ ပါဝင်သော အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလမ်းညွှန်ဖြစ်ပါသည်။ စီးပွားရေးဆောင်ရွက်ချက် အမျိုးအစား၊ ကုန်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ် ကုန်စည်ဝန်ဆောင်မှုများ၊ ကုန်စည်အရွယ်အစား ဖော်ပြခြင်းများနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့မှ နာမည်များစသည်ဖြင့် ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ အသေးစိတ်ကိုရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ အာရှနိုင်ငံများဖြစ်သော ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ တရုတ်၊ ဟောင်ကောင်၊ အိန္ဒိယ၊ ဂျပန်၊ စင်ကာပူ၊ တောင်ကိုရီးယား၊ သီရိလင်္ကာ၊ ထိုင်ဝမ်၊ ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ်တို့မှ ကုမ္ပဏီများလည်းပါဝင်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ သင်သည် မေးမြန်းစုံစမ်းခြင်းပုံစံကို အသုံးပြုပြီး သိလိုသည့် အချက်အလက်ကို ဖြည့်သွင်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ သို့မဟုတ် သင့်လျော်သော အကူအညီများရယူရန် ကျွန်ုပ်တို့ထံ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
3. Myantrade သည် နိုင်ငံခြားမှ အလားအလာကောင်းသောတင်သွင်းသူများ တရားဝင်ဖြစ်ပြီး စစ်မှန်မှုရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးခြင်းအတွက် ကူညီပါသလား။
Myantrade သည် နိုင်ငံခြားမှ အလားအလာကောင်းသောတင်သွင်းသူများ တရားဝင်ဖြစ်ပြီး စစ်မှန်မှုရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးခြင်းအတွက် မကူညီနိုင်ပါ။ သို့သော်လည်း Myantrade တွင် Kompass ရှိ သတင်းအချက်အလက်များအား အခြေခံပြီး အချို့ဈေးကွက်များအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရသော တင်သွင်းသူများ၏စာရင်းကို ရယူနိုင်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ သင်သည် မေးမြန်းစုံစမ်းခြင်းပုံစံကို အသုံးပြုပြီး သိလိုသည့် အချက်အလက်ကို ဖြည့်သွင်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ သို့မဟုတ် သင့်လျော်သော အကူအညီများရယူရန် ကျွန်ုပ်တို့ထံ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
4. နိုင်ငံခြား ဈေးကွက်များတွင် ဝယ်သူ သို့မဟုတ် ဖြန့်ဖြူးသူနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှုဖြစ်ပေါ်ပါက မည်သို့ဆောင်ရွက်သင့်သနည်း။
Myantrade သည် သင့်အား ဒေသတွင်းရှိ ဥပဒေဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးပြီး အကူအညီများပေးနိုင်ပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်ရေး သဘောတူညီချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ အခြေခံအချက်အလက်များကို မျှဝေပေးခြင်း၊ နှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာကျင့်ထုံးများအတွက် အကြံဉာဏ်ပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် Myantrade သည် ဥပဒေဆိုင်ရာအကြံဉာဏ်များ ပေးမည်မဟုတ်ပါ။
5. နိုင်ငံခြားမှ စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်သည် တရားဝင်မှု ရှိ၊ မရှိကို မည်သို့ဆုံးဖြတ်ရမည်နည်း။
သင်သည် နိုင်ငံခြားမှ အလားအလာကောင်းသော တင်သွင်းသူများ တရားဝင်ဖြစ်ပြီး စစ်မှန်မှုရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးသင့်ပါသည်။ စုံစမ်းမေးမြန်းသည့်အခါ တရားဝင်ဖြစ်ပြီး စစ်မှန်မှုရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးဆုံးဖြတ်ရန်အတွက် သင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်မှာ ဘဏ်မှအစီရင်ခံစာ၊ ထောက်ခံစာများအားတောင်းခံခြင်းနှင့် (သင်၏ ကုန်ပစ္စည်းမထုတ်လုပ်မီတွင်) ပွင့်လင်းမြင်သာသော ကြိုတင်ငွေပေးချေစနစ် အသုံးပြုခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုန်ပစ္စည်းကို တင်ပို့ပေးခြင်း
6. နိုင်ငံတကာကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ အကူအညီများ ရနိုင်ပါသလား။
မြန်မာဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင် Website မှ နိုင်ငံတကာသို့ တင်ပို့ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များကို သိနိုင်ပါသည်။ (http://www.mpa.gov.mm/my/shipping-agency)